Fandaharana fanoloana: iPhone vaovao isan-taona | Vaovao IPhone
Apple dia manambara fandaharana fanoloana: iPhone vaovao isan-taona any Etazonia
Pablo Aparicio | | iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Ny alarobia lasa teo dia nanambara i Apple a fandaharana fanoloana iPhone hahafahan'ny mpanjifa mamoaka iPhone isan-taona. Ny rafitra dia azo ampitahaina amin'ny fanofana fiara, izay amoaranay vola be ary fantatray fa manana ny vola rehetra izahay dia mamoaka matetika ary manadino ireo fanahiana. Ny olana dia ity programa ity, farafaharatsiny izao, tsy misy afa-tsy amin'ny faritanin'i Etazonia.
Ho fanampin'izany, toy ny amin'ny fanofana fiara dia misy fiantohana ihany koa ny vidiny AppleCare +, ka araka ny nolazaiko teo aloha dia tsy mila miahiahy na inona na inona isika. Azonao atao ny milaza fa ao amin'ity programa ity dia an'ny Apple ny iPhone ary homen'izy ireo izany ho an'ny mpampiasa mandritra ny herintaona, aorian'izay dia tsy maintsy averin'izy ireo izany ary afaka hivarotra azy io ho toy ny telefaona nohavaozina i Apple.
Ny hany angatahin'izy ireo dia ny mpanjifa manolo-tena hampiasa programa toy izany mandritra ny 24 volana, ka farafaharatsiny mba mila mandoa $ 777,84 ianao. Toy izao ny lisitry ny vidiny:
0.1 iPhone 6s
0.2 iPhone 6s Plus
1 Tena sarobidy ve ny programa Apple Replacement?
16GB: $ 32,41 / volana
64GB: $ 36,58 / volana
128GB: $ 40,75 / volana
16GB: $ 36,58 / volana
64GB: $ 40,75 / volana
128GB: 44,91 / volana
Tena sarobidy ve ny programa Apple Replacement?
Mazava ho azy. Any Etazonia, ny iPhone 6s 16GB dia mitentina $ 649 ary mandoa 32,41 ary raha tsy mandiso ahy ny kaonty na tsy namela na inona na inona aho dia handoa $ 388,92. Mazava ho azy, tsy maintsy tadidintsika fa ity drafitra ity dia ho antsika izay mazava fa te hanavao ny iPhone isan-taona. Raha tsy izany ny olana dia ho very 100 € mahery isika amin'ny "fifanarahana" ananantsika amin'i Apple, izay hanery antsika handoa $ 777,84. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha vantany vao atsahatra ny fampiasana ny programa fanoloana dia ho very vola isika, saingy mino aho fa omena onitra ny fatiantoka raha toa ka indroa farafahakeliny nampiasantsika ilay programa (iPhone telo).
Te hanana firenena hafa ve ity programa ity? Mihevitra ve ianao fa azo atao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Apple dia manambara fandaharana fanoloana: iPhone vaovao isan-taona any Etazonia
Amin'ny maha olona manavao ny iphone-ny isan-taona dia toa tsara amiko izany, tsy mila mitady mpividy isan-taona ho an'ny findaiko aho ... fa toy ny mahazatra, ny zava-drehetra any Etazonia: v
Valiny tamin'i Sebastian
Mariano dia hoy izy:
Miezaka manavao azy isan-taona aho fa avy any Arzantina dia sarotra be amiko, tsy misy fisalasalana raha azoko atao, dia hataoko, ny fanoloana isan-taona.
Valiny tamin'i Mariano
dia dia hoy izy:
Tsy misy vola very, raha tsy manavao ianao dia 24 volana ary mandoa ny vidin'ny terminal feno miampy ny applecare + izay nampidirinao tao amin'ny programa fanavaozana. Ary heveriko fa tsy drafitra iray manonitra any Espana izany, izay ahafahanao mivarotra ny iPhone faharoa amin'ny herintaona mahery mihoatra ny antsasaky ny vidiny ...
Mamaly an'i Jes
Salama, manao ahoana ianao? Tena liana tamin'ny fividianana finday 6 GB Iphone aho ary noho ny fiainana any Etazonia ny rahalahiko dia tsy hanana olana amin'ny fanararaotana an'ity programa ity aho. Safidy tena tsara izy io satria na dia tsy te hanavao ny fitaovanao amin'ny taona manaraka ianao ary aleonao mamita azy, dia ho mora kokoa noho ny hoe mividy vola amin'ny zava-drehetra ianao. Miorina amin'ny vidin'ny terminal 64GB $ 16 ary raha ampiana izany dia omen'ny Apple Care $ 649 $ mitentina 129 $ izay mbola mila ampiharina ny hetra, raha any California isika dia tokony hitovy amin'ny 778% izany. , fa amin'izao fotoana izao dia tsy haiko raha niova ny hetra amin'ity faritra ity, satria rehefa voatanisa ao amin'ny pejin'i Apple izy io dia toa 8% no ampiharina, ary mamela ny vidiny farany $ 8.5 vs ny $ 844.13 dolara izay mandoa vola miaraka amin'ilay programa natolotr'i Apple antsika, ankoatry ny manolotra ny safidin'ny fanovana ny terminal isan-taona. Ny hany lesoka hitako amin'ity dia ny hoe raha mandray an'ity programa ity ianao dia toa tsy maintsy ampidirinao amin'ny orinasan-telefaonin'i Etazonia ny terminal anao, na io no hitako tao amin'ny pirinty tsara teo amin'ilay pejy. Raha diso ny zavatra lazaiko eto dia tiako ny raha mampahafantatra ahy ianao. Miarahaba an'i Pablo, tena tiako ny mamaky izay apetrakao, tohizo.
Scl dia hoy izy:
Ity rafitra ity dia manana izany Vodafone eto Espana izany. Rehefa mividy ny terminal ianao dia mandoa vola isam-bolana ary isan-taona dia azonao atao ny manavao ny terminal. Tsy zava-baovao izany.
Mamaly an'i Scl
iOS 9 beta 5: mitohy ny fampandrenesana fanavaozana sandoka
Afaka manolo ny MacBook vaovao ve ny iPad Pro?